Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Isniinta Wacan ee IMEX America: Isku imaatinka Asxaabtii Hore
"Tani waxay la mid tahay adduun cusub oo warshadeena ah waxayna i siinaysaa rajo ah in 2022 uu noqon doono sanad xooggan." Iibiyaha Valeria Serrano, oo ka socota CTA Event design iyo DMC ee Mexico, ayaa soo koobtay farxada iyo rayn rayntii laga dareemay IMEX America ee bandhiga ka hor maalinta waxbarashada, Smart Monday, oo ay ku shaqaynayso MPI. "Waxay la mid tahay isu imaatinka asxaabtii hore," ayay sii wadatay. "Waxaan dib ula xiriirinayaa saaxiibadeyda warshadaha waxaanan yeelanayaa shirar badan oo la qorsheeyay maalmaha soo socda."
Awoodda nolosha, waayo-aragnimada qof ahaaneed waxay ka dhawaajisay qaylo iyo cad cad qaar badan.
Isniinta Smart, oo ay ku shaqeyso MPI, oo la qabtay Isniinta, Noofembar 8, waxay ahayd maalin u go'ay waxbarashada bandhiga kahor IMEX America.
Maalinta la bilaabay hadal muhiim ah Dr. Shimi Kang, oo ah abaal-marin ku guuleystay Harvard-tababaran dhakhtar caafimaad, cilmi-baare, iyo khabiir neerfaha.
Iibsade Donna Rogers, oo ka socda Solus Sustainable Hydration ee California, ayaa ogolaatay, "Waxaan mar hore buuxiyey jadwalka maamulahayga kulamo fool-ka-fool ah iyo dhacdooyinka isku xidhka!"
Awoodda nolosha, waayo-aragnimada qof ahaaneed waxay ka dhawaajisay qaylo iyo cadcad dad badan oo ay martigelisay Shelby Green, oo ka socota Kooxda Dhacdooyinka Enterprise ee California, ayaa sharraxday, "Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan mar kale arko dadka - waxaana ku faraxsanahay inaanan ku jirin wicitaan kale oo muuqaal ah. !”
Shirarka & dhacdooyinka waa ilaaliyayaasha wanaagga aadanaha
Isniinta Smart, oo ay ku shaqeyso MPI, oo la qabtay Isniinta Noofembar 8, waxay ahayd maalin u go'an ee bandhigga ka hor waxbarashada IMEX Ameerika kaas oo socon doona berito ilaa 11ka November ee Mandalay Bay, Las Vegas.
Maalinta la bilaabay hadal muhiim ah Dr. Shimi Kang, oo ah abaal-marin ku guuleystay Harvard-tababaran dhakhtar caafimaad, cilmi-baare, iyo khabiir neerfaha. Kalfadhigeeda, Ku-socodka xaqiiqooyinka ka soo horjeeda: Qarnigii 21-aad walbahaarka iyo hal-abuurka, Shimi waxay iftiimisay sida xirfadlayaasha dhacdada u fahmaan xidhiidhka aasaasiga ah ee ka dhexeeya waayo-aragnimada fool-ka-foolka ah iyo caafimaadka dhimirka iyadoo leh: "Dhammaantiin waxaad tihiin xirfadlayaasha caafimaadka dhimirka - waxaad ogtahay inaan u baahanahay kulamo, waxaan u baahanahay shirar, waxaan u baahanahay xog. Waa muhiim in tani ay qayb ka noqoto waayo-aragnimadeena bini'aadamka - shirarka iyo dhacdooyinka ayaa ilaaliya wanaagga aadanaha."
Awoodda dabeecadda si kor loogu qaado fayoobaanta iyo hagaajinta waayo-aragnimada dhacdada waxay ahayd diiradda Dabeecada booska - Nidaam deegaan ee guusha dhacdada. Janet Sperstad, Maamulaha Kulliyada ee Kulliyada Madison, waxay si qoto dheer u quusisay iyada oo dhawaan la sii daayay "Dabeecadda booska" IMEX warqad cad. Waxay bixisay hagitaan ku saabsan sida loo soo bandhigo waayo-aragnimada dhacdo toos ah oo "jariya harraadka xiriirka shakhsi ahaaneed iyo bulshada." Cilmi-baadhisteedu waxay faahfaahinaysaa siyaabaha laqabsiga casharrada ugu fiican ee dabiciga ah si loo abuuro dhacdo guulaysata, sida isticmaalka nalka, meel bannaan, iyo sifooyinka deegaanka si loo dhiirigaliyo hal-abuurnimada.
Daqiiqado nalalka - awoodda joogtaynta
Arrimaha deegaanku waxay ahaayeen kuwa hore iyo xaruntii socdaalka xudunta u ah Kulanka MGM Resorts - muuqaal gaar ah oo muuqaallada gadaashiisa ah oo ku saabsan dadaallada joogtada ah ee Mandalay Bay. Ka qaybqaatayaasha waxaa lagu soo bandhigay safafka cadceedda ee saqafka sare ee joogtada ah ee ugu weyn Ameerika kaas oo garab fadhiya tillaabooyinka kale ee saaxiibtinimo ee meeraha sida qashinka cuntada iyo kala soocida qashinka 11 goob dib u warshadayn ah oo ku taal agagaarka goobta loo dalxiis tago. Hawsha ugu adag? U beddelashada nalalka iftiinka LED-yada tamarta waxtarka leh - dhammaan 1.4 milyan oo iyaga ka mid ah!
Safarka xudunta u ah kulanka MGM waxa uu ahaa qayb ka mid ah barnaamijka dalxiiska ee dhacaya Smart Monday, oo bixiya fursado lagu xidhidho meel ka baxsan sagxada bandhiga. Safarka Lip-Smacking Foodie ayaa la wadaagay hoos u dhaca Las Vegas oo ay la socdaan qaar ka mid ah cuntooyinka ugu fiican ee Strip, halka safarka qarsoodiga ah uu ballanqaaday fiidkii la yaab leh oo khibrado gaar ah, goobo qabow, cunto fantastik ah iyo shirkad weyn.
Tiknoolajiyada dhacdadu waxay si aad ah ugu jirtaa ajandayaasha qorshayaasha shirarka waxaana lagu sahamiyay kalfadhiyo ay ku jiraan EventMB Event Innovation Lab™. Mastarclass-ka qorshaynta dhacdada, oo loogu talagalay qorshayaasha shirkadaha iyo wakaalada, ayaa soo bandhigtay hab wax ku ool ah oo ku wajahan qorsheynta, suuq-geynta iyo gaarsiinta dhacdooyinka. Kalfadhiga is dhexgalku wuxuu adeegsaday daraasado kiis iyo isdhaafsiga hababka ugu wanaagsan si loo wadaago nuxurka cusub ee khuseeya adduunka isku-dhafka ah ee dhacdooyinka iyo qorshaynta dhacdada hodanka ku ah tignoolajiyada.
Zephia Bryant, oo ah iibsade ay marti galisay kooxda hogaaminta waxbarashada ee Bryant ee North Carolina, ayaa sharaxday sababta mawduucu uga hadlay iyada, "Qaar badan oo ka mid ah dhacdooyinkaygu waa inay u wareegaan isku-dhafka sidaa darteed waxaan eegayaa hababka ugu fiican iyo hababka cusub."
IMEX America ayaa furmaysa berri, Talaadada Noofambar 9, waxayna socotaa ilaa Noofambar 11 ee Mandalay Bay, Las Vegas.
Nofeembar 22, 2021 at 04: 10
Qof kastaa wuu ogyahay in saaxiibtinimadu ay calaamad u tahay nolosha xitaa si ka qoto dheer jacaylka. Mar kasta, waxa aad fursad u helaysaa saaxiib hore oo waxa ay dareema in aad ka dhex baadhayso boodhka, saqafka hore ee da'da weyn iyo dib u helida hanti. Habka kale ee ugu wanaagsan ee dib loogu soo noolayn karo xusuusta waa adigoo booqanaya meelo aad wakhti hore ku wada qaadan jirteen.